စာမျက်နှာမြန်နှုန်းနှင့်သင့် Vis ည့်သည်များ Martech Zone
စာမျက်နှာမြန်နှုန်းနှင့်သင့် Vis ည့်သည်များ
စနေနေ့, သြဂုတ်လ 6, 2011 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
အလွန်ခက်ခဲသော (သို့) အကုန်အကျများသောသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သောအချက်များထဲမှတစ်ခုသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုတင်ဆောင်သည့်အရှိန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ Martech တွင်ဤစဉ်ဆက်မပြတ်တိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ လူမှုရေးပေါင်းစည်းမှုနှင့်ကြော်ငြာခြင်းတို့သည်စာမျက်နှာကိုနှေးစေခြင်း၊ နှေးနှေးကွေးကွေးဖြစ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ညှိရန်ကြိုးစားသည်။ အထူးသဖြင့်အသွားအလာတွေများလွန်းရင်၊ visitors ည့်သည်တွေဆီကပျောက်ဆုံးတာကိုငါတို့သိတယ်။
အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်ဝန်ထုပ်များကိုအလေးအနက်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ဖောက်သည်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အချက်အမှု၌, Kissmetrics ဆုံးရှုံးမှုကိုပြသတဲ့ဒီအချက်အလက်စုဆောင်းမှုကိုအတူတကွထားပါ။
အကယ်၍ e-commerce site သည်တစ်နေ့လျှင်ဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ ရနေလျှင်၊ ၁ စက္ကန့်စာမျက်နှာနောက်ကျခြင်းသည်သင့်အားနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒေါ်လာ ၂.၅ သန်းအရှုံးပေါ်နိုင်သည်.
အဘယ်ကြောင့် Infographics ကိုအသုံးပြုရန်?
Screenshot Thumbnail ဝန်ဆောင်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ